शोधनान्तरमा किन समस्या? - BBC News नेपाली
शोधनान्तरमा किन समस्या?
Image caption समस्या सुल्झाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयसैग मिलेर प्रयास गरिने गभर्नरले बताएका छन्
देशको आर्थिक स्थायित्वसंग सोझो सम्बन्ध भएको शोधनान्तर बचत वा भुक्तानी सन्तुलनको नाफा केही महिनायता तीव्र दरले घट्नु पछाडीको कारणबारे अधिकारी तथा विज्ञहरुले फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक भन्छ, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले मुद्राको साटो बढ्दोरुपमा सुन पठाउँदा सन्तुलन खल्बलियो। तर कतिपय विज्ञ भन्छन्, नेपालको बैंकका ब्याज दर न्यून हुँदै जाँदा यहाँबाट कर्जा लिएर विदेशतर्फ पूँजी पलायन गर्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था निम्त्याएको हो।
देशले निर्यात, पर्यटन र रेमिटेन्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा र देशले गरेको आयातको लागि तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राबीचको फरक अर्थात भुक्तानी सन्तुलन गत वर्ष यही अवधिमा ६४ अर्ब रुपियाँले नाफामा थियो भने अहिले चाहीं त्यो आँकडा केवल ६ अर्बमा झरेको छ।
कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य स्थिर छ कि छैन भनेर नाप्ने प्रमुख औजार समेत रहेको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको तीव्र ह्रासबारे अहिले अधिकारीहरु चिन्तित छन्।
उनीहरु भन्छन्, केही महिनायता विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले झिटिगुन्टा नियम अन्तर्गत पाइने भन्सार सुविधा उपयोग गर्दै पैसाको साटो सुन ल्याउन थालेकाले समस्या चर्किएको हो। नेपालीले करीब ५० ग्राम अर्थात चार तोला भन्दा केही धेरै सुन ल्याउन पाउने सुविधा छ। जसबाट ल्याउनेलाई लगभग २५ हजारको फाइदा हुन्छ।
यसले शोधनान्तरमा पारेको असरबारे प्रष्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडा भन्छन्, “विदेशी मुद्राभन्दा सुन लिएर आउँदा फाइदा हुने देखेर बाहिर गएका धेरै नेपालीहरुले सुन लेराएका छन्। औपचारिकरुपमा डलर आउने ठाउँमा सुन आयो। त्यो सुन थुपारेर राखियो अथवा अन्तकतै गयो त्यसको अभिलेख नहुने हुनाले हाम्रो विप्रेषण आम्दानीपनि राम्ररी अभिलेखित भएन। यसले गर्दा शोधनान्तर बचत केही कम भएको देखिन्छ।”
तर कतिपय जानकारहरु भन्छन् यत्तिको कारणले मात्रै भुक्तानी सन्तुलनको नाफा घटेको होइन।
औपचारिकरुपमा डलर आउने ठाउँमा सुन आयो। त्यो सुन थुपारेर राखियो अथवा अन्त कतै गयो त्यसको अभिलेख नहुने हुनाले हाम्रो विप्रेषण आम्दानीपनि राम्ररी अभिलेखित भएन। यसले गर्दा शोधनान्तर बचत केही कम भएको देखिन्छ
डा युवराज खतिवडा, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
केही समयअगाडि नेपालका बैंकहरुले ब्याज दर निकै घटाए। खासगरी ठूला व्यापारीहरुले त साढे ६ वा ७ प्रतिशतमै कर्जा पाउँछन् जबकि भारतमा निक्षेपकै ब्याज दरपनि त्यो भन्दा एक डेढ प्रतिशत बढी रहेको बताइन्छ।
यसको फाइदा उठाउँदै कतिपयले यहाँबाट आफुलाई आवश्यक भन्दा धेरै कर्जा लिएर ठूलो मात्रामा रकम भारत लैजाने गरेको र त्यसैले शोधनान्तरमा समस्या चर्किएको ती जानकारहरु बताउँछन्।
तर यो कुरा पुष्टी गर्ने आधार भने भेट्टाउन कठिन हुने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ठान्छन्।
“खासगरी निक्षेपमा ब्याज दर घटेको कारणले त्यस्तो भएको हो की भन्ने देखिन्छ। तर फेरि त्यसो हो भने कर्जा पनि उही अनुपातमा बढेको देखिनु पर्छ नि त बैंकिंग क्षेत्रमा। अनि बैंकसंग रहेको निक्षेप त्यही मात्रामा घट्नु पर्यो। देखिने किसिमबाट त्यस्तो कुरा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने।
पाँच वर्ष अगाडि सुनको आयात देशको कूल आयातकै एक चौथाई सम्म पुगेर नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नराम्ररी खलबलिएको थियो। त्यतिखेर सरकारले सुन आयातमा कडाइ गर्नुका साथै सुनमा लाग्ने भन्सार समेत बढाउन अध्यादेश ल्याएको थियो।
तर यसपटक चाहीं त्यो हदसम्मको समस्या नभएकाले र यसको प्रकृति पनि भिन्नै देखिएकाले राष्ट्र बैंकले गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसंग मिलेर समाधानको उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ।